C/raxman C/shakur “Farmaajo shirka Dhuusmarreeb inta uusan furmin ayuu irdaha u soo xiray” | Jowhar Somali news Leader
Home News C/raxman C/shakur “Farmaajo shirka Dhuusmarreeb inta uusan furmin ayuu irdaha u soo...
C/raxman C/shakur “Farmaajo shirka Dhuusmarreeb inta uusan furmin ayuu irdaha u soo xiray”
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa facebook kaga hadlay khudabadiii uu maanta Madaxweyne Farmaajo ka jeediyey Baarlamaanka.
Cabdiraxmaan Cabddishakuur ayaa sheegay in uu Madaxweyne Farmaajo inkiray Jiritaanka Aqalka sare islamarkaana ku xadgubbat awood qeeybsiga siyaasadeed ee dalka.
“Farmaajo wuxuu inkiray jiritaanka Aqalkii sare, kaalintii ay wakiilka kaga ahaayeen Dowlad Goboleedyadana wuxuu siiyey Golaha Shacabka. Wuxuu sidoo kale ku xadgudbay awood qaybsigii siyaasadeed, kaddib markii uu diiday in uu magacaabo Raysalwasare soo dhisa xukuumad xilliga kala guurka hoggaamisa. Hadalkiisana wuxuu ahaa aniga ayaa labadiiba isku ah. Madaxweyne Farmaajo nin dhowraya heshiis lala galay maaha, sababtoo markii ay Dhuusamarreeb 2 soo dhammaatay wuxuu riday Raysalwasaarihiisii, nin Dastuur iyo sharci tixgeliyana maaha, sababtoo ah wuxuu oggolaaday sharci darridii lagu riday xukuumadda, isagoo magacaabay raysalwsaare xil sii hayn ah oo aan Dastuurka meelna kaga dhignayn.”ayuu qoraalkiisu ku sheegay hogaamiyaha xisbiga Wadajir
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in Madaxweyenaha uu irdaha u soo xiray shirka Dhuusmareeb ka hor inta uusan furmin, isagoo sheegay in damaanad qaad caalami ah oo keli ah lagu aamini karo .
“Farmaajo shirka Dhuusmarreeb inta uusan furmin ayuu irdaha u soo xiray, cid walbana way ogtahay in Golaha Shacabka uusan yeeli doonin waxaan muddo kororsi ahayn. Haddaba sida keli ah ee heshiis looga gaari karo doorasho la isla ogol yahay, xiligeedana ku dhacda, waa in la helo Xukuumad la aamino iyo dammaanad qaad caalami ah oo la isku haleyn karo” ayuu yiri CCW
Sidoo kale Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir ayaa yiri; “Waxaa muuqata in madaxwyne Farmaajo uusan weli waano qaadan, kuna kedsoon yahay, dulqaadka dadka oo uu doqonnimo iyo tabar la’aan mooday iyo qar iska tuurnimo in badan u soo shaqeysay. Ma jirto meelo badan uu ku sii dhuunto, maalmihiisuna way tirsan yihiin.
Juxa oo soo bandhigay afar arrimood oo lagu xusuusan doono Kheyre
Soomaaliya iyo Mareykanka oo kala saxiixday heshiiska deyn cafinta
Guddiga Farsamada Soo Xulista Baarlamaanka 2aad Hirshabelle oo gaaray magaalada Jowhar